'कसैले भनिदियोस्, राजनीति गर्ने ठीक उमेर कति हो ?'
राजनीतिप्रति धेरैको नकारात्मक बुझाइ छ ।
आम मानिस आफ्ना सन्तानलाई ‘डाक्टर’, ‘ईन्जिनियर’ बनाउने सपना बुनी बस्छन् ।
सरकारी क्याम्पसमा ब्याप्त राजनीतिक प्रभावको भयले ऋण खोजेरै प्राइभेट कलेजमा भर्ना गरिदिने चलन छ ।
प्रीय पाठक !
तपाईँ पनि आफ्ना सन्तान राजनीतिमा सक्रिय नभएको देख्न चाहानुहुन्न त ?
तर २३ बर्षे मुस्लिम युवक तपाईँको चिन्तनलाई चुनौती दिँदैछ । जो गोरखाको दुर्गम गाउँ हर्मीमा जन्मिएर हुर्कियो ।
पछिल्लो समय तपाईँहरुले धेरैपटक सुनेको नाम हो, अब्दुश मिया । राजनीतिलाई जसले घृणा गर्नुहुन्छ नी, अब्दुशको काहानी साँच्चिकै लोभलाग्दो ठान्नुहुनेछ ।
सिमान्तकृत मुस्लिम समुदायका आम युवाहरुको उद्धेश्य के हुनसक्ला रु उनीहरु आफ्नो बाल्यकाल र किशोरावस्थामा के सोच्छन् रु यही समुदायमा अशाक्षर आमा र बिदेशिएका बावुको जेठो सन्तान कस्ता सपना बुनेर बाल्यकाल बिताउला ?
अब्दुशले आफ्नो आकांक्षाको क्षितिज यति तन्काए की, राजनीतिको फराकिलो मैदानमा उत्रिए ।
अब्दुश मियाले आफ्नो टिभी कार्यक्रम ‘द ओपन स्पेस’मा पाहुनाका रुपमा बोलाइएका बीबीसी नेपाली सेवाका तत्कालिन प्रमुख रविन्द्र मिश्रलाई एउटा प्रश्न सोधेका थिए ‘तपाइँ पोलिटिक्समा आउने कुनै योजना छ कि छैन ?’
त्यही प्रश्न सोधेको ३ बर्षपछि उनै प्रश्नकर्ता अब्दुशलाई रविन्द्र मिश्रले एक प्रभावशाली र सबैभन्दा कान्छा नेताको रुपमा आफ्नो ‘अल्टरनेटिभ पोलिटिकल फोर्स’ (बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति) अभियानमा भित्र्याए ।
कुनैबेला अंग्रेजीमा प्रेरणदायी अन्तवार्ता गर्दै विश्वको सबैभन्दा कम उमेरको अन्तवार्ताकारको परिचय बनाएका अब्दुश नेपालकै कान्छो राजनीतिज्ञको रुपमा उदाउँदैछन् ।
हर्मीमा हुर्कँदै गर्दा आमाले उनलाई मदरसा ९मुस्लिम पाठशाला० मा भर्ना गरिदिएकी थिइन् । बावु २० बर्षदेखि अझै पनि देश बाहिर साउदीमा श्रम गरिरहेका छन् । अब्दुश सुनाउँछन्, ‘बा–आमा दुबैले १ कक्षा पनि पढ्नुभएको छैन । बुवा जीवन चलाउनकै लागि परिवार छोडेर साउदीमा संघर्ष गरिरहनुभएको छ ।’ हो । त्यही परिस्थिति नै अब्दुशको लागि राजनीति गर्ने पृष्ठभुमि बन्यो ।
‘विदेशी भुमीमा श्रम वेचिरहेका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउनु छ । दैनिक हुने हजारौं पलायन रोक्नु छ’ अब्दुश आफ्नो राजनीतिक उदेश्य सुनाउँछन् ।
काठमाडौं आएपछि नै उनलाई अनेक अनौठा कुराले नयाँ अनुभव मिल्यो । कम उमेरमै राजनीतिप्रति उनको रुची र साहश सांच्चिकै अनुकरणीय छ ।
धेरैले उनलाई ‘कच्चा उमेर’को भनी राजनीतिमा अहिले नै परिपक्व नभएको टिप्पणी गर्छन् । तर उनी यस्तो टिप्पणी अस्विकार गर्छन् ।
राजनीतिमा उमेर भन्दा पनि क्षमता र दक्षता महत्वपूर्ण ठान्छन् । ‘यदि म नेतृत्व लिन सक्षम छु भने मेरो उमेरले केही फरक पार्छ र ?’, उनको तर्क छ, ‘कुनै जिम्मेवारी वहन गर्न मानिसको उमेरले महत्व राख्छ कि उसको सोचाईले रु यदी उमेरले महत्व राख्ने हो भने कसैले मलाई भनिदियोस् राजनीति गर्ने ठीक उमेर कति हो ?’
त्यतिबेला उनी दंग परे जतिबेला बुढानिलकण्ठस्थित बालविकास स्कुलमा पुगेपछि प्रिन्सिपल महेश श्रेष्ठले अंग्रेजीमा नाम सोधे, ‘ह्वाट इज योर नेम ?’ । जवाफमा ‘अब्दुश मियाँ’ मात्रै भनिदिए । प्रिन्सपलले सोधेका अरु थुप्रै प्रश्न उनले बुझेनन् । बाल्यकालको त्यही क्षण उनलाई संघर्षको उर्जा बनिदियो । सन्झन्छन्, ‘त्यही बेलादेखि एम्बिसियस बन्न सिकें ।’
अब्दुशले बाल्यकालदेखि नै बाबुको माया अनुभुति गर्न पाएनन् । मुस्लिम परिवारमा जन्मिएर हिन्दु बाहुल्य समाजमा हुर्किन पाउँदा दुई फरक संस्कृति बुझ्ने अवसर चाहीँ भयो ।
कक्षा ५ को पढाईका लागि उनी काठमाडौं आएका थिए । दुर्गम पहाडी गाउँबाट मेगा सिटीमा ओर्लिँदा यहाँको पेरिफेरी अब्दुशलाई निकै अनौठो लाग्थ्यो । ‘मोटर पनि नपुगेको गाउँबाट यति ठूलो सहरमा आउँदा कल्चरल सक नै भएको थियो । त्यो अनुभव राम्रोसँग भन्न पनि सक्दिन ।’
काठमाडौं आएको केही दिनमा उनको जीवन सामान्य बन्दै गयो । केही दिनपछि सुरु भएको स्कुले जीवनले उनलाई अनौठो दुनियामा पु¥यायो ।
गाउँको स्लामिक विद्यालयबाट आएको बालकलाई यहाँका स्कुल अनौठा लाग्ने नै थिए । स्कुलमा टाई, जुत्ता लगाउनुपर्ने, झोलामा कपी किताव बोक्नुपर्ने र हरेक विषयका फरक–फरक कापी बनाउनुपर्ने बाध्यता उनका कमजोरी बने ।
अब्दुशले बुढानिलकण्ठकै हिमालय बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी पास गरे, जेभियर एकेडेमीबाट टेन प्लस टु र यति हेल्थ साइन्स क्याम्पसबाट पब्लिक हेल्थमा स्नातक गर्दैछन् ।
सानैदेखि नेतृत्व गर्ने उनको स्वभाव थियो । साना समुहको पनि अगुवा बन्थे उनी । विद्यालयमा पढाउने देखि रेडियो तथा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोता पनि बने अब्दुश ।
सन् २०१० देखि उनी स्मार्ट क्लब भन्ने कार्यक्रममा संलग्न भए र सार्वजनिक बहसमा सक्रिय भए । त्यससँगै सोही वर्ष अब्दुशले युथ इनिसियटीभ संस्थाको सदस्यता लिए ।
सन् २०११ मा अब्दुशले एस्। आई। टी। ग्र्याजुएट युनिभर्सिटी, अमेरिकाद्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित सेमिनार ‘कन्ट्याक्ट साउथ एसिया’ मा बिश्वकै सबैभन्दा कान्छा सहभागी हुने अवसर पाए । यो उनको सक्रियताकै शिलशिला थियो ।
धेरै सफताका पाइला चुमेका अब्दुसको लक्ष्य फराकिलो छ । उनी सफलताका यी श्रृंखलाहरुसँग दंग परेर बस्नु भन्दा पनि शिखरमा लैजान चान्छन् । त्यसो त अहिलेका नयाँ पुस्ताका युवाहरुका कार्यशैलीप्रति उनलाई चित्त बुझेको छैन ।
सन् २०१३ मा अमेरिकन दुतावासको युथ काउन्सिल सदस्य बने । यही क्रममा उनी युवा अधिकारका विषयमा सक्रिय भएर बहस गर्थे ।
यही क्रममा ‘स्टडी अफ युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट’मा ‘पब्लिक पोलिसी एण्ड गभर्मेण्ट लिडरशिप’ विषयमा २ महिने कोर्श लिने मौका पनि पाए । यही बर्ष नेपाल फर्केर उनले ‘नेशनल डायलग अन युथ पोलिसी इन नेपाल ’नामक कार्यक्रमको आयोजना गरे।
सन् २०१४ मा केही साथीसँग मिलेर ‘द ओपन स्पेस’ नामको टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु गरे । कार्यक्रमले निकै राम्रो चर्चा पायो । अन्ततः ओपन स्पेश टिभि कार्यक्रमलाई संस्थाकै रुपमा विकास गरे । ओपन स्पेश संस्थाको अध्यक्ष बने अब्दुश २ वर्षसम्म ।
सन् २०१५ मा अर्को संस्था संचालन गरे, ‘लिडरशिप कर्नर’ । जसबाट उनले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सिकाउने काम गर्दैछन् । यही संस्थाले अर्को युथ फोरमको जन्म गरायो, ‘ईम्प्याक्ट टक्स’ । हरेक बर्ष हुने उक्त कार्यक्रम दोस्रो संस्करणपछि छुट्टै संस्था बनेको छ । अचेल हरेक ४ महिनामा ‘ईम्प्याक्ट टक्स सिरिज’ आयोजना हुन थालेको छ ।
लिडरशिप कर्नरले अब लगत्तै ‘सामाजिक उध्यमशिलता क्याम्प’ को आयोजना गर्दै छ। १५ दिनको आवासिय क्यापमा नेपालभरिबाट ३० जना युवाहरु छानिनेछन्। ‘ क्याम्पमा सबैभन्दा पहिले प्रशिक्षण गराउछौँ । नयाँ सोच र सम्भावनाहरुलाई आवश्यकता अनुसार फण्डिङ पनि गर्छौँ,’ अब्दुशले भने । प्रशिक्षकका रुपमा नेपालका सफल उध्यमीका साथसाथ युनाईटेड अरब ईमिरेट्सका बिभिन्न बिश्वबिध्यालयबाट प्राध्यापकहरु आउने उनले बताए।
सन् २०१० मा साधारण सदस्य बनेर युथ इनिसियटिभमा छिरेका अब्दुश ६ महिनाअघि नेतृत्वमा पुगेका थिए । राजनीतिमा सक्रिय हुने निधो गरेसँगै संस्थाको नियम अनुसार राजीनामा दिएका छन् ।
यतिधेरै सफताका पाइला चुमेका अब्दुसको लक्ष्य फराकिलो छ । उनी सफलताका यी श्रृंखलाहरुसँग दंग परेर बस्नु भन्दा पनि शिखरमा लैजान चान्छन् । त्यसो त अहिलेका नयाँ पुस्ताका युवाहरुका कार्यशैलीप्रति उनलाई चित्त बुझेको छैन ।
२१ औं शताब्दिका युवा वर्ग अझै पनि सगरमाथा र बुद्धको देश भन्दै गर्व गरेर फेसबुकमा स्ट्याटस पोष्ट गरेरै समय बिताउन नहुने उनको तर्क छ । ‘आर्थिक पाटो सशक्त नभए सफलता दिगो हुन्न त्यसैले मैले आफुलाई अर्थसँग पनि जोड्ने प्रयास गरेको छु र विगत २ वर्षदेखी मैले टेक्नोरियो नामक सफटवेर कम्पनि पनि संचालन गर्दैआएको छु ।’
विभिन्न कार्यक्रम तथा सभा समारोहमा गइराख्नुपर्ने अव्दुशको मासिक खर्च आम युवाको भन्दा अलिक धेरै नै हुनेगर्छ । त्यसो त ४ वर्ष बढी भयो उनले घरमा पैसा माग्न छोडेको । ‘४ वर्षदेखि घरमा पैसा माग्नु परेको छैन । आफ्नो लागि आफैँले खर्च जुटाउन थालेको छु ।’
पत्रकार मिश्र लगायत सँग नयाँ पार्टी गठनका लागि पछिल्लो ७ महिनादेखि सक्रिय छन् अब्दुश । उनको राजनीतिक सपना पनि ठूलै छ । भन्छन्, ‘देशलाई हामीजस्ता युवाको खाँचो छ । अबको पाँच वर्षभित्र जनताको सबैभन्दा मनपरेको पार्टी बनाउने लक्ष्य छ । जनताको आधारभुत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने र भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्ने हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो । यति मात्रै भयो भने पनि देश धेरै माथि जान्छ ।’
‘फोहोरी’ उपमा दिइएको राजनीतिमै कसरी सम्भावना देखे अब्दुसले रु यही हो उनको जोखिमपूर्ण यात्रा । आम युवा रातारात धनी बन्न बिदेशको बाटो नापिरहँदा अब्दुश चाहीँ राजनीतिको जोखिमपूर्ण धरातलमा उभिएका छन् ।
नेतृत्वदायी युवाको प्रतिनिधि पात्र बनेर सन् २०१५ देखि लिडरशिप कर्नरबाट नेतृत्व विकासमा अध्ययन र प्रशिक्षण दिँदैआएका अब्दुश अरु लाखौँ युवालाई विदेश जानबाट रोक्न चाहन्छन् ।
थप्छन्, ‘देशले उचित राजनीतिक नेतृत्व पाउन नसकेका कारण आजको अवस्था आएको हो । राजनीतिले ठूलो मात्रामा परिवर्तन ल्याउनसक्छ भन्ने मैले बुझेको छु । राजनीतिमार्फत युवाशक्ति पलायन रोकेर सम्मान सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राजनीतिक अभियानमा लागेको हुँ। ’